Ku saabsan Aasraw Biochemical Technology Co., ltd
Aasraw Biochemical Technology Co., ltd waxaa aasaasey shan qalinjabiyayaal ah oo ka qalin jabiyay kuliyadaha cilmiga kimikalka ee jaamacada Tulsa, Oklahoma, oo ku taal qalbiga Mareykanka.
AASraw-ka cusub ee la aasaasay wuxuu kasbaday maalgelin bilow ah oo muhiim ah, sidaas darteedna wuxuu soo jiitay tiro ka mid ah farmashiyeyaasha tayada sare leh, badankoodna waxaa ugu horreyn xoogga la saaray warshadaha bayoolaji. Iyadoo lagu guuleystey wareegii ugu horreeyay ee maalgelinta, waxaan ku maalgelinnay qalab tayo sare leh oo loogu talagalay soo-saarista, nadiifinta, iyo falanqaynta khadka wax soo saarka. Waxaan nahay shaybaar isku dhafan oo buuxa, oo si fudud uma iibiye wax soo saarka shirkadda kale. Waxaan haynaa qalab dhameystiran, oo ay ka mid yihiin - kalalorimetry iskaanka kala duwan, chromatography dareere waxqabad sare leh, spectroscopy infrared, ultraviolet-spectroscopy iwm. Waqtigan xaadirka ah waxaan shaqaaleynaa in ka badan labaatan injineero farsamo oo muhiim ah. Hantidayada joogtada ahi waxay guud ahaan ka badan yihiin soddon milyan oo doolar (US).
Marka lagu daro mashaariicdeena muddada dheer ee mashruuca iskaashiga ah, waxaan qorsheynay shan ilaa sideed mashaariic sanadlaha ah. AASraw waxay leedahay wax ka badan boqol jibbaarada wax soo saarka bulk. Qiyaastii sideed ka mid ah xeryahooda ayaa si toos ah loogu siiyaa macaamiisha, halka qiyaastii ilaa labaatan ayaa lagu soo saarey qandaraas in ka badan soddon shirkadood oo dawooyinka dawooyinka adduunka ah.
Iyadoo la raacayo hal-ku-dhigga "Xigmad, Iimaan, Adeeg," AASraw waxay siineysaa alaabo leh tayo gaar ah, qiimo jaban, iyo waxtar buuxa si ay si fiican uga caawiso nolosha adduunka oo dhan. Dhammaan alaabooyinka ka socda AASraw waxaa lagu siiyaa daahir aan ka yarayn 98%, dhammaantoodna si adag ayaa loo xakameeyaa iyadoo la raacayo ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP ama shahaadooyin kale sida looga baahan yahay inay buuxiyaan heerarka looga baahan yahay dalalka soo dejinta.
Innovation waa il awoodeena. Shaqada adag ee dhammaan shaqaalaheena qaaska ah, iyo dadaalkooda wadajirka ah ee ay la leeyihiin ganacsiyada, kulliyadaha iyo machadyada, AASraw waxay hagaajisay waxtarka nooceeda ah ee ugu yaraan 30%, ka caawinta hoos u dhigista qiimaha alaabta marka loo eego alaab-qeybiyeyaasha kale si fiican u adeega macaamiisha daacad u ah, iyo sidoo kale yareynaya qashinka gala deegaanka.
AASraw waxay isku dayaysaa in la dhigo heerka tayada iyo qiimaha. Waxaan bixinnaa adeegyo daacad ah, iyo kiimikooyin tayo sare leh iyo farsamoyaqaanno, si ay kuu keenaan oo kaliya ugu wanaagsan ee xeryahooda. Waxaan dajineynaa heerka tayada cusub ee warshadeena.